ekugcineni Noma yimuphi imoto aluphala, ngoba metal ivame zingagugi. Yiqiniso, abanikazi ozama bandise nokuphila imishini yabo. Enye yalezi zindlela ukwelashwa anti-ukugqwala phansi umshini. Kwenze kungenzeka esiteshini inkonzo noma izandla.
Corrosion metal - lokhu kuyinto inqubo ngenakugwemeka. Ngokuhamba kwesikhathi, umzimba imoto ivele izindawo ibuthuntu, okuyinto kancane kancane siguqulelwa imbobo. Ngenxa yamandla abo kwesakhiwo kuyehla, futhi misalignment kungenzeka. Lesi simo kuyingozi kakhulu futhi kungabangela ingozi. Ukuze ugweme lokhu, isicelo ukwelashwa anti-ukugqwala ngezansi.
Corrosion emotweni kuyinto ngezinhlobo eziningi:
Negesi (ubhujiswe okokunciphisa umsindo chamfer valve ekamelweni amandla omlilo, igemfe esidayisa).
Corrosion ku electrolyte (umswakama ekuqongeleleni isikhala).
Ngo neelektrolite (Ukubhujiswa kwabantu izinhlelo uwoyela fuel).
Imininingwane ukugqwala (izindawo lapho ngezinto ezihlukahlukene nabo).
Umqhewu (umswakama aqoqana izikhala kuholela nokuwohloka metal).
Corrosion ezenzeka ngaphansi ukungezwani (ngaphandle nokucekelwa ngaphansi kwamandla aphezulu).
ukugqwala Atmosphere (Ukubhujiswa kwabantu metal wadalula isimo sezulu ngesikhatsi isitoreji kanye nokusebenza imoto).
Mechanical (ukulimala umshini kusuka phansi amatshe kanye amatshe punches).
Kakhulu konakalisa wemoto
Ngokuvamile uhlushwa ukugqwala futhi phansi imibundu imoto. Ukugibela endleleni utshani okusezingeni eliphezulu Isula ungqimba zokuzivikela. amatshe amancane eshaya ngokumelene ingxenye engezansi yomzimba, udala umonakalo phezu kwensimbi, okuzokwenza ekugcineni uqale ukugqwala. Ngakho-ke akuyona isikhathi sibaluleke kakhulu ukuba senze umsebenzi wokulungisa, okufanele kubandakanye underbody ukwelashwa ukugqwala.
Kusukela kokuwa amapayipi metal nazo ukuhlupheka, uwele futhi uzimele. Uma ungenalo ukubaphatha ejenti anticorrosive, basheshe kakhulu angene labhidlika.
Rust ubamba ukubopha uhlelo kanye entwasahlobo kubakaki. Ngenxa-ke, izimbobo zingavela iminyango, fenders futhi amabhampa.
Ngokuvamile, zonke izingxenye zensimbi abadinga ukunakekelwa. Ungakhohlwa ngakho. Uma ungenalo lokufeza ukwelashwa anti-ukugqwala, izingxenye kungaba uzokhathala, futhi okuwukuphela kwendlela uzobe kuphela esikhundleni.
Namuhla emakethe linikeza eziningi anti-ukugqwala ejenti. Phakathi kwabo kukhona ethandwa kakhulu ekwelapheni phansi mastic, zonke izinhlobo upende ayinhlama, ezisiza ukubuyisela ikhava umzimba. Lezi izinto zokwakha kuvikelwe ngempumelelo kwensimbi kusukela izinhlobo ezahlukene imithelela emibi.
ukwelashwa Anti-ukugqwala imoto phansi ngokuvamile kwenziwa umnikazi eyakho. Ngezansi, sizoxoxa ngendlela ukuze sifeze umsebenzi. Begodu kuqakathekile ukukhetha amanxusa anti-ukugqwala. Kuwufanele benaka yokuthi kufanele ube kulezi zimfanelo:
Isimiso (izindlela kumele kube ephephile umzimba womuntu imvelo).
Ukumelana izinto athile.
Ductility (uhlobo ukuze uthumele izingxenye imoto ngesikhathi ukunyakaza).
Okukushoyo machining zangaphakathi nezangaphandle
phansi ukwelashwa anti-ukugqwala kuyinto inqubo ebalulekile, kodwa ungakhohlwa ukuthi izingxenye yangaphakathi futhi kuncike inqubo lokubola. Ake sixoxe ngalokho amathuluzi kangcono ngoba kusebenzeke ngaphandle, futhi yini okufanele embozwe izingxenye zangaphakathi.
Izingxenye zangaphandle zihlanganisa phansi, isondo yayinamakhothamo kanye Sills. Ziyakwazi njalo nabo amatshe nesihlabathi flying kusukela ngaphansi amasondo izimoto. Ukuze yabo Kunconywa plastic ukucutshungulwa amathuluzi, ezifana itiyela mastic bituminous, libhekene anti-umsindo izakhiwo.
I yangaphakathi metal izingxenye Ukwakheka ukwelashwa umzimba kokuba wax noma amafutha ezisekelwe. Banezinhliziyo ukungaguquguquki ketshezi futhi adambise imifantu amancanyana, akakuvumeli ukuthi zikhule.
Ukukhetha inkonzo for Anticorrosi
ukwelashwa Anticorrosion uma imoto abhekwa ngaphezulu. Lokhu kungenxa yokuthi umshayeli abavamile abakwazi ukubona zonke izici zomzimba bese ukhetha ezifanele anti-ukugqwala ejenti kahle. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe imoto uzokusindisa kusukela kokuba izindleko yayo isikhathi nomzamo.
Thola isevisi esiteshini esifanele futhi uthole uhla lwamanani kuyinto kahle kulula. Ngokwesibonelo, phansi ukwelashwa anti-ukugqwala Petersburg wenziwa ezihlukahlukene services kulo lonke idolobha, ukuze ukwazi ukukhetha i-ofanele kalula.
Ukufika e-isevisi ekhethekile, kumele uhlole amakhosi imininingwane eyisisekelo umsebenzi, okuyilezi:
Okuchaza ngokumelene ukugqwala zisebenza.
Indlela ukususa i nokugqwala ekhona.
Yini indlela isicelo enamathela.
Uma inkosi ukhuluma uzethembe futhi kahle imininingwane ke isevisi ongamethemba futhi ungesabi semoto yakho.
Kungakhathaliseki ukuthi wenzani ukwelashwa anticorrosion ngokwabo noma iya isevisi ezikhethekile, umsebenzi unezigaba eziningana:
Into yokuqala umshini kufanele kahle wageza izinto zokususa amabala. Imoto kufanele aluthole udumo olulinganayo ukuhlanza hhayi kuphela umzimba kodwa futhi phansi.
Khona-ke udinga ukuze ome kahle yonke imininingwane. Can ukusheshisa le nqubo by afuthwe ngomoya hot.
Lapho imoto esomile, kufanele zihlolwe for ukukhubazeka. Ukuthola imifantu, imihuzuko and chips ngempela kumele kusetshenzwe.
Kungemva kwalokho uqala ukwelashwa nge ejenti anticorrosive.
Isevisi lezi zinyathelo kwenziwe ochwepheshe. Uma uya ukwenza ukucutshungulwa ngokwabo, uzodinga isikhathi esiningi, kodwa umphumela kuwufanele.
ukwelashwa Anti-ukugqwala phansi ngezandla
Okokuqala, umshini efakwe lift. Amasondo kumelwe kususwe, ngoba akudingeki ukwelashwa.
Phansi kufanele wageza nge nengcindezi enamandla amanzi ashisayo. Kufanele kwenziwe ngokucophelela ukususa konke ukungcola.
Khona-ke kudingeka balahle ukugqwala. Kungcono ukusebenzisa le njongo isihlabathi iphepha noma umshini ukugaya.
Lapho bonke nokugqwala isuswe, kufanele imoto omisiwe, afuthwe ngomoya yayo efudumele ngosizo dryer ukwakhiwa, kungenjalo phansi ukwelashwa anti-ukugqwala kuyinto ayizwakali.
Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba aqhube olunzulu Ukuxazulula phansi, okuyinto ilethwa aphume imifantu nezimbobo nge antikorra.
Ngemva kwalokho, umshini zingabekwa amasondo futhi aphansi. Ukusebenzisa imoto hhayi Kunconywa emini. Ake wammisa ngiyothatha ikhava.
Indlela yokufaka isicelo enamathela ukugqwala ukumelana
Kahle kangakanani kusetshenzwe antikorrom imoto kuncike empilweni imishini. Ukuze ugweme nobunzima kule nqubo, kufanele azi kusengaphambili ngokushaywa isicelo izici ezihlukahlukene izindlela.
izindlela Liquid kangcono Kusetshenziswe airless spray isibhamu. Kubiza kakhulu. Kukhona futhi ngezibhamu ezikhethekile ukuze athole ukwelashwa anti-ukugqwala. Ngo izindawo wayiswa, umlomo wombhobho nezimo esetshenziswa.
Icubungula kungaba kwenziwe nge ibhulashi. Ukusebenza isidingo sakhe ukuze ngokucophelela, hhayi ngiphakamisa imali eningi ngesikhathi. Zonke izinto kufanele kube ngokucophelela promazyvat. Ukuze ugweme ukungcoliswa idrayivu ibhande generator, basuke Kunconywa ukuvala ifilimu.
Ukuthola ekuphatheni imoto, kufanele uhlole imithetho yezokuphepha ukuze ugweme izingozi.
Phatha imoto kufanele kube egumbini kahle umoya.
Kumele zithobele imithetho yokuphepha umlilo lapho sishaye imikhiqizo. izinto ezivuthayo akudingeki ukushiya ngaphansi kwelanga.
Ukuze afeze umsebenzi odingekayo ashisa akangaphezu 30 s. Ngokwesibonelo, ukugqwala yokuphathwa phansi Lipetsk, kanye nakwamanye amadolobha, kushisa kufanele kwenziwe ngokucophelela okukhulu.
Uma ejenti waqhubeka ingxenye enkulu yomzimba, udinga ubageze ngensipho. Ngemva contact antikorra esweni, bona agezwa ngamanzi agobhozayo imizuzu engu-15.
Awukwazi ukushiya izindlela namathuluzi ingagadiwe.
Manje uyazi ukuthi ukwelashwa anti-ukugqwala imoto ngezandla zakhe phansi. Thola ukusebenza kufanele kube kuphela amakhono ukusebenza umshini nokuba nesikhathi khulula. Kungenjalo kungcono ukuxhumana esiteshini inkonzo.
Indlela ukufaka semoto ezingemuva iwindi Equalizer?
Ukwahlukaniswa amabombo: izici esikhundleni kwedivayisi
BlueScreen, iphutha. Indlela ulungise amaphutha BlueScreen?
Ukuzamazama komhlaba e Moscow nemiphumela yabo. Ukuzamazama komhlaba eziqine eMoscow
Indlela ukuqeda izintwala efulethini-indlu